Ukukhula okungazelelwe kwabantu baseMadolobheni nokwandiswa kwamadolobha kubonise ukukhula okumangazayo kwesidingo sezibhedlela, amahhovisi, izikhungo zokuthenga, amafektri nezindlu. Ukwengeza kulokhu umphumela wokuguquguquka kwesimo sezulu uphoqelele i-HVAC njengesidingo sokuziphilisa nokuphila okunempilo kubantu abakhula njalo emadolobheni.
Ukusebenza kahle kwamandla manje sekuyimfuneko ebalulekile ekufakweni okusha kwe-HVAC. Ohulumeni emhlabeni wonke bethule imithethonqubo eklanyelwe ukukhuthaza ukuthathwa kwezinhlelo ze-HVAC ezihambisana nezindinganiso zemboni zokusebenza kahle kwamandla.
Imboni ye-HVAC ingumthengi omkhulu wezaMandla naManzi, ngenxa yalokho ibhekene nekusasa elihlakaniphile nentuthuko kwezobuchwepheshe obuhlakaniphile. Lokhu kufaka phakathi amasistimu wokuqapha ukusetshenziswa kwamandla esakhiwo kanye nokulawulwa kokukhishwa kwamandla kohlelo lwe-HVAC.
Lapha lapho imikhiqizo ye-SPL idlala indima enkulu, kungaba ukufudumeza, ukungena komoya, ukupholisa umoya noma ukupholisa, i-SPL inesisombululo esifanelekile sokushintshanisa ukushisa. Ezinhlelweni Zokupholisa Zesifunda ku-Industrial Process Solutions, imishini yethu iqinisekisa Ukonga Amandla Namanzi kumakhasimende ayo.
Ukuze uqhubeke nokuqonda isicelo, sicela uxhumane noMmeleli Wethu Wokuthengisa.